ဘေးလွတ်ရာေြ ပးဖို့ အထုတ်ပိုးတွေပြ င်ပြီး ပုန်းနေရတဲ့ မိသားစု အတွက် စိတ်ပူနေပေမယ့် ဘာမှမလု ပ်ပေးနိုင်လို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ချမ်းမင်းရဲထွဋ် – Shwe Likes
ဘေးလွတ်ရာေြ ပးဖို့ အထုတ်ပိုးတွေပြ င်ပြီး ပုန်းနေရတဲ့ မိသားစု အတွက် စိတ်ပူနေပေမယ့် ဘာမှမလု ပ်ပေးနိုင်လို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်
မော်လ် ဒယ်သရုပ်ေ ဆာင်မင်းသားချော ချမ်းမင်းရဲထွ ဋ်ကတော့ တော်လှ န်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ ရပ်တည်နေကာ အရေးတော်ပုံကြီး မှာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်ကတော့ ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် အခြေအနေတွေ ဆိုးရွားနေတဲ့ ကယားပြည်နယ် အတွက် စိတ်ပူပင်နေပြီး မိသားစုရဲ့လက်ရှိအခြေအတွေကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြလာပါတယ်..။
မိသားစု အတွက် စိတ်ပူနေပေမယ့် ဘာမှမလု ပ်ပေးနိုင်လို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်
ဘေးလွ တ်ရာကိုပြေးဖို့ အထုတ်အပိုးေ တွပြင်ဆင်ထားပြီး ပုန်းနေရတဲ့ လွိုင်ကော်က မိသား စုတွေအတွက် စိတ်တွေ ပူနေရပေမယ့် အိမ်မပြန်နိုင်လို့ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ မိသားစုနဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွ ယ်ရပေမယ့်လည်း စိတ်ပူ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အြေ ကာင်းတွေနဲ့အတူ မိသား စုတွေအပြင် ပြည်သူတွေ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းစေဖို့ကိုလည်း ဆုတောင်းစကားဆိုထားပါသေးတယ်..။
“စိတ်တွေပူလိုက်တာ … အမေတို့လည်း အခုကို အထုပ်ပြင်ပီး ပုန်းနေရတဲ့အခြေအနေ …ခုကပြန်သွားလို့လည်းမရ … ညကဖုန်းဆက်တော့လည်း .. သားပြန်လာလိုက်ရမှာလို့ပြောတာ …. ဘာပဲပြောပြော အိမ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ရှိတော့ တခုခုဆိုကူလို့ရတာပေါ့လို့ပြောတာ ….
အိမ်သားတစ်ယောက်အဝေးမှာရှိနေတာပဲ တစ်ယောက်စာပိုစိတ်အေးရတယ်တဲ့ … လွိုင်ကော်ရေ ….. ပြည်သူတိုင်း မိသားစုတိုင်းဘေးကင်းပါစေကွာ …. 😔🙏🏽 PrayForKayah..” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ကယားပြ ည်နယ်အတွက် ပြည်သူပရိသတ်တွေအားလုံးက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသလို မိသားစုတွေအတွက် စိတ်ပူပင်နေရတဲ့ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်ကိုလည်း အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ေမာ္လ္ ဒယ္သ႐ုပ္ေ ဆာင္မင္းသားေခ်ာ ခ်မ္းမင္းရဲထြ ဋ္ကေတာ့ ေတာ္လွ န္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူေတြ နဲ႕အတူ ရပ္တည္ေနကာ အေရးေတာ္ပုံႀကီး မွာ တတ္နိုင္သေလာက္ ပါဝင္ေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္..။ ခ်မ္းမင္းရဲထြဋ္ကေတာ့ ပစ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ အေျခအေနေတြ ဆိုး႐ြားေနတဲ့ ကယားျပည္နယ္ အတြက္ စိတ္ပူပင္ေနၿပီး မိသားစုရဲ႕လက္ရွိအေျခအေတြကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာျပလာပါတယ္..။
ေဘးလြ တ္ရာကိုေျပးဖို႔ အထုတ္အပိုးေ တြျပင္ဆင္ထားၿပီး ပုန္းေနရတဲ့ လြိုင္ေကာ္က မိသား စုေတြအတြက္ စိတ္ေတြ ပူေနရေပမယ့္ အိမ္မျပန္နိုင္လို႔ ဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။ မိသားစုနဲ႕ ဖုန္းအဆက္အသြ ယ္ရေပမယ့္လည္း စိတ္ပူ စိုးရိမ္ေနရတဲ့ အေၾ ကာင္းေတြနဲ႕အတူ မိသား စုေတြအျပင္ ျပည္သူေတြ အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းေစဖို႔ကိုလည္း ဆုေတာင္းစကားဆိုထားပါေသးတယ္..။
“စိတ္ေတြပူလိုက္တာ … အေမတို႔လည္း အခုကို အထုပ္ျပင္ပီး ပုန္းေနရတဲ့အေျခအေန …ခုကျပန္သြားလို႔လည္းမရ … ညကဖုန္းဆက္ေတာ့လည္း .. သားျပန္လာလိုက္ရမွာလို႔ေျပာတာ …. ဘာပဲေျပာေျပာ အိမ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္ရွိေတာ့ တခုခုဆိုကူလို႔ရတာေပါ့လို႔ေျပာတာ ….
အိမ္သားတစ္ေယာက္အေဝးမွာရွိေနတာပဲ တစ္ေယာက္စာပိုစိတ္ေအးရတယ္တဲ့ … လြိုင္ေကာ္ေရ ….. ျပည္သူတိုင္း မိသားစုတိုင္းေဘးကင္းပါေစကြာ …. 😔🙏🏽 PrayForKayah..” ဆိုၿပီး ေရးသားေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။ ကယားျပ ည္နယ္အတြက္ ျပည္သူပရိသတ္ေတြအားလုံးက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကသလို မိသားစုေတြအတြက္ စိတ္ပူပင္ေနရတဲ့ ခ်မ္းမင္းရဲထြဋ္ကိုလည္း အားေပးစကားေတြ ေျပာထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။
Source;Cham Min Ye Htut’s Fb Acc
“What happened to the wolf” ဇာတ်ကား ကန်တော့ပွဲ မှာ ပျော်ရွှင်နေခဲ့တဲ့ ပြည်သူချစ် မင်းသမီးနှစ်ဦးရဲ့ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ပုံရိပ်လေးများ
၅၀၅က ကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေရ တဲ့ အချိန်မှာတောင် လိုအပ်တာတွေ ကူညီလှူဒါန်းပြီး အားဖြည့် ပါဝင်နေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း